Environment Industrial - Baoding Lead Fluid Technology Co., Ltd.
Continuous flue gas emission monitoring system (CEMS) inoreva mudziyo unoramba uchitarisisa kutariswa uye kuburitsa kwese kwezvinosvibisa gasi uye tunhu twakaburitswa nezvinosvibisa mweya uye kuendesa ruzivo kune vane masimba munguva chaiyo.Kuburikidza nesaiti sampling, kuwanda kwezvinosvibisa mugasi reflue kunoyerwa, uye zvimiro zvakaita setembiricha yegesi yeflue, kudzvanywa, kuyerera, humidity, uye okisijeni yemukati inoyerwa panguva imwe chete, uye chiyero chekubuda uye huwandu hweflue. zvinosvibisa gasi zvinoverengerwa.
Mushure mekunge gasi remuenzaniso rapinda mu cabinet yekuongorora, hunyoro huri mumuenzaniso wegasi hunokurumidza kupatsanurwa kuburikidza nedehumidification system uye mvura yakanyungudutswa inobudiswa.Iyo dehumidification system inowanzoumbwa ne condenser, sampling pump, pombi yeperistaltic uye alarm inoenderana. kudzora zvikamu.Iyo peristaltic pombi inoshandiswa kuburitsa condensate.
Kukanganisa kwakajairika kweiyo flue gasi pamhepo yekutarisa system ndeiyi: kutonhora kweiyo condenser haina kunaka, uye huwandu hukuru hwemwando mumuenzaniso gasi hauna kupatsanurwa, izvo zvinokanganisa kushanda kwakajairwa kweflue gasi analyzer.Kana ikamhanya kwenguva yakareba, inokuvadza analyzer.
Kutariswa kwegasi kunoda kunyatsoona kusimba kweiyo yekutarisa system.Naizvozvo, iyo condensate discharge system inodiwa kuve nekusimba kwakanaka kudzivirira kunze kwemhepo kupinda mucondenser kuburikidza neiyo drainage system uye inokanganisa sampuli gasi kuumbwa.
Iyo condensate ine makemikari akaoma uye inoparadza.Naizvozvo, iyo condensate drainage system inofanirwa kuve neyakanaka corrosion resistance.Kana iyo sampuli yekusefa gasi isina kunaka, mvura yakanyungudutswa ichange iine zvimedu zvimedu, uye iyo yakanyungudutswa yekuburitsa mvura system inofanirwa kunge yakakodzera zvinwiwa zveabrasive.Iyo pombi yekudhonza inofanirwa kuve yakakodzera kune vacuum nharaunda uye inogona kumhanya ichienderera.
KT15 akatevedzana peristaltic pombi
• Lead Fluid KT15 pombi misoro inokodzera ID0.8 ~ 6.4mm, madziro ukobvu1.6mm Pharmed, silicone chubhu, Viton zvichingodaro, inogona kumhanya ichienderera pasi mu 100rpm uye Max kuyerera rate 255ml/min, interval achimhanya, Max kumhanya 250rpm. , max flow r akadya 630ml/min.
•KT15 pombi musoro roller muviri uchishandisa yekare elastic yakagadziriswa chimiro, inogona kupa chaiyo yakatsetseka kuyerera renji uye yakanakisa chubhu hupenyu.
•Pressure chubhu gap inogona kunyatso-tuned, inokodzera akasiyana madziro ukobvu uye kubuda kwakawedzera kudzvanywa.
•Pombi musoro wemuviri uchishandisa PPS zvinhu, rollers muviri uchishandisa PVDF zvinhu, yakanakisa michina zvivakwa uye makemikari kuramba.
•Pombi musoro chivharo uchishandisa translucent purasitiki, kuona pombi musoro wemukati kushanda mamiriro zviri nyore, kudzivirira nekunze marara mumusoro wepombi, yakavhurika-kavha yekuvhara basa (inosarudza).
•Kuisa chubhu ine mhando mbiri: yekubatanidza yakavakirwa-mukati uye chitubu chubhu clip, iyo yakakodzera kune zvimwe kushanda zvinodiwa.
•Supply type 57 stepper mota, AC synchronous mota uye AC/DC giya mota dhiraivha, mapaneru uye yepasi bhodhi yakagadziriswa nzira, yakakodzera kushandisa zvinosiyana zvidiki uye zvepakati nepakati zviridzwa nemidziyo.
TY15 akatevedzana peristaltic pombi
• Lead Fluid TY15 (spring easy-load) pombi musoro unotora nyore-mutoro dhizaini dhizaini, flexible yekumusoro kudzvanya, spring roller chimiro, chubhu iri nyore kuisa uye ine hupenyu hurefu hwesevhisi.
•Muviri we roller une dhizaini rekubata, uye chubhu ine yakakwirira kumhanya kuvimbika.
•Yakashongedzerwa yakakosha chubhu yekubatanidza, iyo chubhu inogadziriswa yakavimbika.
•Muchina wese wakagadzirwa nepamusoro-inoshanda zvinhu zvine yakakwirira michina zvinhu uye yakanaka makemikari kuramba.
•Inokodzera mhando dzemota.Inokodzera kushandiswa kwepakati kuyerera, inogona kushandiswa mumidziyo, chiridzwa, marabhoritari, nezvimwewo, yakakodzera COD, CEMS online monitoring.
Zvakanakira zveLead Fluid peristaltic pombi
1. Iine airtightness yakanaka, hapana valve uye chisimbiso zvinodiwa, uye hapana mvura inodzokera shure uye siphon ichaitika.Kunyange kana pombi isiri kushanda, iyo hose ichasvinwa uye yakavharwa zvakanaka, iyo inogona kudzivirira kunze kwemhepo kupinda mu condenser kuburikidza nehurongwa hwemvura uye kukanganisa gasi kuongorora migumisiro.
2. Pakufambisa mvura, mvura yacho inongosangana nemukati wepaipi.Kusarudza hose yakagadzirwa neakakodzera corrosion-resistant material inogona kushandiswa kuendesa corrosive condensate kwenguva yakareba.
3. Nesimba rakaderera rekuveura, pakufambisa mvura ine zvimedu zvakasimba, hapazovi nezvinetso zvejamming, uye hazvizokanganisa hupenyu hwebasa repombi.
4. Nekukwanisa kwakasimba kwekuzvidzivirira, uye pombi inogona kuoma pasina kukuvadza, inogona kunyatsobudisa condensate uye kuderedza mari yekugadzirisa.